‘मिस वर्ल्ड जित्नु मेरो लक्ष्य’ – Nepal Press
‘मिस वर्ल्ड जित्नु मेरो लक्ष्य’
‘म सानो–सानो कुरामा खुसी खोज्छु’
२०७७ मंसिर २८ गते १४:४१
यो विन्दुसम्म आइपुग्दा आफूलाई कसरी मानसिक र भौतिक रूपमा तयार पार्नुभयो ?
मिस नेपाल भइसकेपछि सबै जनाको आँखा तपाइँमा हुन्छ । बरु थोरै समयका लागि होला, सबैले तपाइँलाई हेरिरहेका हुन्छन् । अनुभव प्रशस्तै हुनुपर्छ । के सोच्ने, कसरी बोल्ने र व्यवहार कस्तो गर्ने भन्ने कुरा सकारात्मक हुनुपर्छ । यस्तो खालको डिटेलिङमा ध्यान दिएँ । शारीरिक रूपमा फिट एन्ड फाइन, संचार शैली बलियो हुनुपर्छ । मान्छेहरूको अगाडि बोल्नमा म डराउने मान्छे हो । त्यसमा कन्फिडेन्ट निर्माण हुनु जरूरी थियो । यही कारण मैले मिस कन्फिडेन्टको सबटाइटल पनि जितें ।
मिस वर्ल्डको आगामी संस्करण कहिले हुन्छ भन्ने निधो अझै छैन । यस्तो अन्योलमा तयारी कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ? यसले तयारीमा बाधा पुर्‍याउँछ कि पुर्‍याउँदैन ?
व्यक्तिगत रूपमा विश्व सुन्दरीको ताज लगाउने मेरो सपना छ । तर, सोच्दैमा मात्र हुँदैन । विधा र त्यसको चुनौतीबारे म हिडन ट्रेजरसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्छु । हामीसँग अझै समय छ । पहिलेका मिस नेपालको चुनौती बुझेर डिजाइनरसँग विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछु ।
तपाइँका रुचिहरू के कस्ता छन् ?
कलामा निकै रुचि भएको मान्छे हुँ म । डान्सिङ–पेन्टिङ मनपर्छ । आर्ट एन्ड क्राफ्टमा रङसँग खेल्न मनपर्छ । गुगल, युट्यूबमा नयाँ–नयाँ फ्याक्टहरू हेर्ने गर्छु । मलाई सिक्न मनपर्छ । फेरि युट्यूबमा मिस नेपालको इभेन्टलाई पुनः एकपटक शुरूदेखि नै हेर्न मन छ । फिल्म र गीत हेर्न रमाइलो लाग्छ । नेपाली फिल्म उद्योग पनि अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ ।
प्रकाशित: २०७७ मंसिर २८ गते १४:४१